CHARLOTTESVILLE န်းကျင်အကောင်းဆုံးစပျစ်ဥယျာဉ်များနှင့်ဘီယာမှတစ် ဦး ကလမ်းညွှန် - နှုန်းထားများ
Charlottesville န်းကျင်အကောင်းဆုံးစပျစ်ဥယျာဉ်များနှင့်ဘီယာမှတစ် ဦး ကလမ်းညွှန်
ဒါဟာနောက်တဖန်နှစ်၏အချိန်ဖြစ်ပါသည်: ရာသီဥတုကောင်းတဲ့, ဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်ထောင့်လှည့်ပတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်စဉ်းစားနိုင်သမျှနေ့က (နှင့်ည) သင့်လျော်စွာသောက်ရန်မည်သို့မည်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
frat darty သင့်ရဲ့အရာမဟုတ်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့၏ရေငတ်ပြေဖို့န်းကျင်ကိုအကောင်းဆုံးစပျစ်ဥယျာဉ်နှင့်ဘီယာအချို့ကိုစာရင်းပေးအပ်ပါတယ်။
ငါသည်ဤစပျစ်ဥယျာဉ်၏အေးစရိုက်များတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်နေစဉ်, သင်က DMB ပန်ကာမဟုတ်လျှင်ပင်သင်ကထွက်စစ်ဆေးသင့်ကြောင်း, Dave Matthews ကတည်ထောင်ခဲ့သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဖွဲ့စည်းပုံကိုယ်နှိုက်ကမယုံနိုင်လောက်အောင်အမြင်များနှင့်အတူအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မြည်းစမ်းခြင်းသည်လူတစ် ဦး လျှင်ဒေါ်လာ ၆ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်သည်သင်၏ဖန်ခွက်ကိုသင်နှင့်အတူယူဆောင်လာပါကသင်၏ဒုတိယ၊ တတိယနှင့်စတုတ္ထ (စသည်တို့) အရသာသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
သူတို့ကစပျစ်ရည်စိုက်ပျိုးသူများကိုလည်းရောင်းချကြသည်။ သင်ဝယ်ယူပြီးလျှင်ဝိုင်၏ကုန်ကျစရိတ်အတွက်စားပွဲနီနှင့်အဖြူများဖြင့်ပြန်လည်ဖြည့်နိုင်သည်။ သငျသညျ 12 ရာခိုင်နှုန်းအရက်နှင့်ပြည့်ဝသောစိုက်ပျိုးသူရှိနိုင်သည့်အခါအဘယ်သူသည်ဘီယာ၏စိုက်ပျိုးသူလိုလား? ငါမဟုတ်။
yeah, ရဲရင့်ရော့ခ် Virg, Bilt နှင့် Eddy ရဲ့ (သို့မဟုတ်နံပါတ်3သို့မဟုတ်သူတို့ကဒီကယနေ့ခေါ်ဆိုနေသမျှ) မှာသောက်ဘို့ငါ့သွားလာရင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်နယ်လ်ဆင်ကောင်တီရှိ Cidery သည်မယုံနိုင်လောက်သောအမြင်များ (အံ့အားသင့်စရာမရှိပါ) နှင့်အရသာရှိသောအစားအစာများအတွက်သွားရောက်လည်ပတ်သင့်သည်။ သူတို့ကသစ်တော်သီးနဲ့သူတို့ရဲ့မျှမျှတတ IPA အသစ်များကဲ့သို့သော cider ရှာဖွေရန်ပိုမိုခက်ခဲရောင်းချကြသည်။ သူတို့ကယခုငါ (ဒါကြောင့်ငါ့ကိုမမေးကြဘူး) ကိုမြည်းစမ်းကြပြီမဟုတ်သည့် Honeydew cider ထွက်လှိမ့်ပါတယ်။
သငျသညျအပြာရောင် Ridge တောင်တန်းများသို့မိုင်အနည်းငယ်မောင်းနှင်ကဲ့သို့မခံစားရဘူးဆိုရင်, သင်အမြဲပဲမြို့လယ်တောင်လမ်းမှ ဦး ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါတွန်းလှည်းအားဖြင့်ဝင်ရောက်ဖို့လွယ်ကူ, So. စိန့် Charlottesville ရဲ့အရှည်ဆုံးပြေးဘီယာနှင့်အရက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မှာအင်္ဂါနေ့ကဒေါ်လာ ၂ ဒေါ်လာလည်းရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်က Mellow ရဲ့ပိုင့်ညမှာပျင်းနေရင်မင်းမှာတခြားရွေးချယ်စရာတွေရှိသေးတယ်။
တစ်ခါကငါဒီမှာမကောင်းတဲ့နေ့စွဲကိုသွားပေမယ့်ငါညဉ့်ကယ့်ကိုအကောင်းဖြစ်ခြင်းဘီယာကိုမှတ်မိကြ - ဒါကြောင့်သူကတန်ဖိုးရှိသောအရာကိုအဘို့ကိုယူ။
ဂျနီဖာအနစ္စတန်လက်ထပ်ထိမ်းမြားသောနေရာတွင် Pippin Hill သည် ပို၍ စျေးကြီးသည်၊ သို့သော်ထိုဒေသရှိအလွန်ကောင်းမွန်သောစပျစ်ဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဝိုင်ဖန်ခွက်အားလုံးသည် Charlottesville စပျစ်ဥယျာဉ်များမှဖြစ်သော်လည်း Pippin Hill မှသူများသည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့ကတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ ပုံသဏ္’reာန် ပဲ။ ဘာကြောင့်ငါအရမ်းကြိုက်လဲမသိဘူး၊
ဒါ့အပြင်သူတို့ရဲ့အနီရောင် Pump စပျစ်ဝိုင်သည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Pippin Hill ကိုပိုင်ဆိုင်သောသူများသည် Downtown ကုန်တိုက်ရှိ Red Pump စားသောက်ဆိုင်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြသော်လည်း၎င်းတို့သည်ထူးဆန်းဆန်းပြား။ စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့် Red Pump စပျစ်ဝိုင်ကိုမ ၀ ယ်ကြပါ။ ငါကဲ့သို့အရူးလုပ်မထားပါနဲ့။
Blue Mountain သည်အပြာရောင်တောင်များကိုအဆိုးဝါးဆုံးမြင်ကွင်းတစ်ခုအဖြစ်မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိသည်၊ သို့သော်စားသောက်ဆိုင်၏ခံစားမှုကြောင့်ဤဘီယာစက်ရုံသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ Bold Rock သည်ရေခဲမုန့် (သို့) အသားညှပ်ပေါင်မုန့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်းအပြာရောင်တောင်တန်းတွင်မီနူးအပြည့်အစုံရှိသည်။ သူတို့၏စိုက်ပျိုးသူများသည်တောင့်တင်းသောပန်းပွင့်ပန်းအိုးများကိုပြုလုပ်ကြသည်။
ဒီစပျစ်ဥယျာဉ်ကို Donald Trump ရဲ့သားကပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ (လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကမှငါတကယ်မသိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို) ကြည့်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ငါမိုးရွာရွာ၌မိတ်ဆွေတစ် ဦး ၏မွေးနေ့အဘို့အသွား။ ပင်ထို့နောက်ကလှပသောဖြစ်ခဲ့သည်။
သို့သော်ထိုသို့နေဆဲ Trump ကပိုင်ဆိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်အလိုတော်အတိုင်းယူပါ။
အချို့သော artsy မိုးရွာရွာဓာတ်ပုံများများအတွက်ဒေသတွင်း
ဒါ့အပြင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နှင့် Bold ရော့ခ်ရန်အလွန်နီးကပ်, တောရိုင်း Wolf ကငါကြီးမားတဲ့ပန်ကာဘူးသောအားလုံး၎င်း၏မြို့ရိုးကိုကျော်သေလွန်သောသူတို့သည်တိရိစ္ဆာန်များပါဘူး။ သူတို့ကအစစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထက်ဘီယာစက်ရုံထက်ပိုများပါတယ်၊ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးအချဉ်ပုဆိုးအချို့ရှိပါတယ်။
Pro အကြံပေးချက် - ပျော်စရာဓာတ်ပုံများအတွက်ကျိုးပဲ့နေသော Urban Outfitters တွင်ရုပ်ပုံများသုံးနိုင်သောကင်မရာတစ်လုံးဝယ်ပါ
ဂျက်ဖာဆန်သည်ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့သောသမိုင်းများစွာတွင်ရှိနေသော်လည်းအတန်အသင့်စိတ်ဝင်စားမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်၊ သို့သော်သောမတ်စ်ဂျက်ဖာဆန်ကိုယ်တိုင်ဒီမှာစိုက်သောမူလစပျစ်သီးနှင့်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည် ငါထင်တယ်။
စပျစ်ရည်ကိုသောက်နေစဉ်သို့သော်သင်ကိုယ်တိုင်ဂျက်ဖာဆန်၏အရိပ်အယောင်နှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်သည်။ သူတို့မှာတကယ့်ကောင်းတဲ့နှင်းဆီရှိတယ်၊ ငါကျောင်းပြီးတဲ့ညမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝယ်ပြီးသောက်ခဲ့တယ်။
မင်္ဂလာရှိသောစပျစ်ဥယျာဉ်မှ hopping, Wahoos ။